Madaxtooyada Puntland oo warsaxaafaded ka soo saartey safarkii wafdiga UN-ka+Sawiro – SBC
Madaxtooyada Puntland oo warsaxaafaded ka soo saartey safarkii wafdiga UN-ka+Sawiro
Ku Xigeenka Wakiilka Gaarka ee UN-ka oo Safar Shaqo ku yimid Puntland Wafdi ka socda Xafiiska Siyaasadda Somalia ee Qaramada Midoobay (UNPOS) ayaa maanta soo gaaray Magaalada Garowe ee caasimadda Dowladda Puntland. Wafdigaan ayaa waxaa hogaaminayay Mr. Christian Manahl oo ah ku-xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Somalia.
Wafdigaan ayaa garoonka diyaaradaha ee Garowe waxaa ku soo dhaweeyey Wasiirka Arrimaha Gudaha Gen. C/llahi Ahmed Jamac (Ilkajir), Wasiirka Maaliyadda Dr Farax Cali Shire, iyo Mr. C/aziz Maxamad oo ah mas’uulka xafiiska UNPOS u qaabilsan deegamada Puntland. Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr C/raxman Maxamad Maxamud (Farole) ayaa kulan kula yeeshay wafdiga xarunta Madaxtooyadda Puntland ee Garowe. Arrimaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa socodsiinta howlaha xilliga ka guurka ah, heshiiskii loogu magacdaray “Kampala Accord,” iyo wadatashiyo ku saabsan shirka Somalida oo ay qaban qaabinayso Qaramada Midoobay.
Mr. Manahl ayaa cadeeyey in iscasilaadii Rai’sul Wasaarihii hore ee Dowladda Federaalka KMG ah (DFKMG) Md. Maxamad C/llahi Farmajo ay ahayd talaabadii ugu horeysay ee hirgalinta “Heshiiskii Kampala”. Sidoo kale, Mr. Manahl wuxuu sheegay inuu rajaynaayo in Madaxweynaha DFKMG ah uu si dhaqso ah usoo magacaabi doono Rai’sul Wasaare cusub, isagoo la tashanaya qeybaha kala duwan ee DFKMG ah iyo maamullada dalka ka jira.
Wuxuu ku amaanay Puntland ka soo qeybgalka shirarka looga tashado aayaha Somalia wuxuuna ku booriyay Madaxda Dowladda Puntland inay sii wadaan dadaalkooda. Madaxweynaha Puntland ayaa ugu mahadceliyay Wafdiga UN-ka imaantinkooda wuxuuna hoosta ka xariiqay inay Dowladda Puntland taageersan tahay howlaha nabadeynta Somalia oo uu hormuud ka yahay Wakiilka Gaarka ah ee UN-ka u qaabilsan arrimaha Somalia, Ambassador Augustine Mahiga.
Shirkaani ka dib ayaa Wafdigii dib ugu duulay Magaalada Nairobi.
Source: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland